Izinto eziluncedo ezingundoqo-i-Amethystum Storage Technology Co., Ltd.
Iinzuzo zenkonzo yemveliso kulo lonke ikhonkco loshishino
Inkampani ithatha imidiya yokugcina i-optical njengendawo yokungena, iphuhlisa izixhobo zokugcina i-optical kunye nezisombululo, kwaye yenze iteknoloji yemveliso ye-industry chain kunye neteknoloji kunye nendlela yophuhliso lwamashishini "i-media-device-solution".
Imithombo yeendaba yokugcina ye-Blu-ray (i-BD-R) elahlayo yenkampani (i-BD-R) idibanisa ifomyula engundoqo kunye nenkqubo yemveliso yezinto ezingaphiliyo zokurekhoda kunye nezixhobo ezibonisa umaleko wokugcinwa kwedatha ephezulu yokusebenza, ukufezekisa ishishini lokugcina le-Blu-ray lasekhaya elinepropathi ezimeleyo yengqondo. amalungelo, isebenzisa ushishino kugcino lwedatha enkulu yorhwebo kunye nenqanaba lovimba. Iqaphela ukulawulwa kokuzimela kobuchwephesha obuphambili bemidiya yokugcina i-optical kwaye ikwindawo ehamba phambili e-China.
Ukomelela okuqhubekekayo okutsha
Inkampani lishishini eliphambili letekhnoloji yokugcina i-optical eChina. Emva kwexesha elide lokuqokelelwa kwe-R&D ezimeleyo, inkampani inokuqhubeka nokuphanda kwaye iphuhlise iimveliso kunye neenkonzo zokugcina ezihlaziyiweyo. Okwangoku, inokuphendula kwiimfuno ezilungiselelwe kunye nezobuchwephesha zabathengi abasezantsi ngokufanelekileyo nangokukhawuleza, ukubonelela abathengi ngoluhlu olubanzi lwezisombululo.
Izibonelelo ezizimeleyo zokulawula uthotho lweemveliso
Inkampani kuphela kweshishini logcino lwamehlo (ezilithoba kuphela emhlabeni) kunye ne-BD-R esezantsi-umaleko wokubhala ikhowudi engqinwe yi-International Blu-ray Alliance kwilizwe laseTshayina kwaye inamandla obuchule obutsha bobuchwephesha bokugcina i-Blu-ray. .
Inkampani lishishini elinguvulindlela ekukhuthazeni ulawulo lokugcinwa okubandayo kunye nokutshisa okutshisa ngexesha elikhulu ledatha e-China. Izenzele ngokuzimeleyo uluhlu lweenkqubo zokugcina idatha ye-Blu-ray, kwaye iteknoloji iyonke ifikelele kwinqanaba eliphezulu lasekhaya. Iimveliso zokugcinwa kwe-optical yenkampani zineenzuzo ezizodwa ezifana nokhuseleko oluphezulu kunye nokuthembeka, ubomi obude bokugcinwa, ukugcinwa kwamandla okusingqongileyo, iindleko eziphantsi zokugcina iyunithi, kunye nokufezekisa ukulawulwa kokuzimela kwimidiya, isofthiwe kunye ne-hardware.